Halyayga reer Brazil Ronaldo oo difaacay Neymar Jr, isagoo dhinaca kale amaanay Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Russia) 04 Luulyo 2018. Halyayga reer Brazil Ronaldo ayaa wuxuu xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu sii ahaan doono sida uu haatan yahay, xitaa hadii uu ka dhaqaaqo kooxda Real Madrid.
Weeraryahankii hore xulka qaranka Brazil ayaa wax laga weydiiyay mustaqbalka Cristiano Ronaldo ee garoonka Santiago Bernabeu wuxuuna kaga jawaab celiyay.
“Waxaan maqlay arintan laakiin maa garanayo xaqiiqada jirta, laakiin Cristiano Ronaldo wuxuu ahaan doonaa sida uu haatan yahay meel kasta uu u dhaqaaqo”.
Halyayga kooxda Real Madrid ayaa sida laga soo xigtay wargeyska dalka Spain kasoo baxa ee “Marca” wuxuu ka qoomameeyay eedeymaha uu kala kulamay Neymar Jr qaar ka mid ah halyeeyada kubada cagta sida Alan Shearer iyo Gary Lineker
“Kubada cagta waxa ay leedahay fikrado badan, Neymar si xirfadeydan ayaa u dhaqaaqayaa, waa inaan ilaalino isaga, sababtoo ah wuxuu leeyahay hibo weyn”.
“Waxa uu la kulmay Neymar, waxay u egyihiin waxa aniga igu dhacay”.
“Waxaan lasoo kulmay dhibaatooyin fara badan ee gudaha garoonka ah iyo dhaleeceeno kala duwan, laakiin waxay ahaayeen kuwo wax kama jiraan ah”.
“Neymar wuxuu bixinayaa qaab ciyaareed fiican koobka aduunka 2018, wuxuu hormar sameeyay xili muhiim ah, hadii uu xulka Brazil kula guuleysto koobka aduunka taas waxay ka dhigan tahay wuxuu soo afjari doonaa waayaha Messi iyo Ronaldo”.
"Waxaan u maleynayaa in xulalka Brazil, England iyo France ay ku guuleysan karaan koobka aduunka”… Wenger